कांग्रेस महाधिवेशन- ‘डिजिटल भोटिङ’ बाट ! - Baikalpikkhabar
कांग्रेस महाधिवेशन- ‘डिजिटल भोटिङ’ बाट !
काठमाडौं, साउन ५ / नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारी रहिरहेमा प्रविधिको प्रयोग गरेर महाधिवेशन गर्न सकिने गरी विकल्प तयार पारेको छ।
विश्वप्रकाश शर्मा प्रमुख रहेको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले ‘डिजिटल भोटिङ’ प्रविधिबाट महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्प अगाडि सारेको छ।
कोरोना अहिलेकै अवस्थामा रहिरहे भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म हुने १४ औं महाधिवेशनमा यो प्रविधि लागू गर्न सकिन्छ। तर यो प्रविधिबाट महाधिवेशन गर्नेबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्छ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार डिजिटल भोटिङ सबै तहका अधिवेशन गर्नका लागि तयार पारिएको भने होइन। ‘प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनमा डिजिटल भोटिङ प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ शर्माले भने।
यो प्रणालीअनुसार कांग्रेसले महाधिवेशन गर्ने हो भने महाधिवेशन प्रतिनिधि काठमाडौं वा प्रदेशका केन्द्रहरूमा उपस्थित हुनु पर्दैन।
‘जिल्ला-जिल्लामा भोट गर्ने केन्द्र हुन्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि ती केन्द्र पुगेर भोट दिन सक्छन्,’ शर्माले भने। तर घरबाटै भोट दिन भने मिल्दैन।
यो प्रविधि केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठहर गरेमा लागू गर्न सकिने शर्माले बताए।
‘डिजिटल भोटिङबारे आन्तरिक प्रविधि विकास र सुनिश्चित गरिएको छ। केन्द्रीय समितिले जरुरी ठानेमा लागू हुन्छ,’ विभागका सचिव दिनेश थापा मगरले भने, ‘७७ जिल्ला पार्टी कार्यालयमा गएर प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।’
निर्वाचन सम्बन्धी सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सक्ने गरी प्रविधिको विकास गरिएको छ।
उनकाअनुसार डिजिटल भोटिङको नमूना प्रदर्शनीको तयारी पनि छ। यसबारे जिल्ला तहसम्म प्रविधि प्रशिक्षण र सहजीकरणका लागि दक्ष इन्जिनियरहरुको नेटवर्क तयार गरिएको उनी बताउँछन्।
कांग्रेसले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन गर्ने बताएको छ। कांग्रेसमा ९ लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य छन्।
यस्तै महाधिवेशनमा ५ हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्। उनीहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर महाधिवेशन गर्न महामारीका बेला सम्भव नहुने भएकोले प्रविधिमार्फत् महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने गरी प्रविधिको विकास गरिएको छ।
कांग्रेसले यसपटक क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको इन्ट्री गर्ने काम पनि प्रविधिमार्फत् नै गरेको थियो। सफ्टवेयर बनाएर कांग्रेसले देशभरबाट २१० केन्द्र बनाएर क्रियाशीलको विवरण केन्द्रीय सफ्टवेयरमा इन्ट्री गराएको थियो।
मङ्गलबार, ०५ साउन, २०७८, दिउँसोको ०२:५७ बजे